NALA SHAQEE : Kana Mid Noqo Xubnaha Shaqaalaha Shabakadda Dalmarnews.com
OGAYSIIS OGAYSIIS OGAYSIIS:
Dalmarnews.com waxa ay u baahan tahay shaqaale cusub oo ka mid noqda bahda Dalmarnews.com ee howsha balaaran u haya Sidii umada Afka Somaliga ku Hadla Loosoo Gaadhsiinlahaa Wararka iyo Barnaamijyada Afka Somaliga Ku Baxa iyo wixii la xariira.
Hadii aad dooneyso inaad la shaqeyso www.dalmarnews.com, joogtidna gobolada ama magaalooyinka Somaliland iyo somalia Putland, Iyo Dibadaba fadlan fiiri sharuudaha ku horyaala, islamarkaana Nagala soo xiriir Ciwaankeeyaga dalmarnews@gmail.com
Si aanu u xoojiyo wariyaasha kala duwan ee kala Jooga Gobolada iyo Magaalooyinka Somaliland iyo Somaliyaba islamarkaana akhristyaaashayada ay u helaal warar dhex dhexaad ah oo ka turjumaya dhacdooyinka markaa dhacaya iyo Barnaamijyada Diiniga iyo arimaha Bulshadaba ah kadib ayaan go’aansanay inaan u dhaqaaqno kordhinta iyo kobcinta shaqaalaha ka howlgala dalmarnews.
Sharuudaha lagaaga baahan yahay:
1- Inaad kasoo baxday ugu yaraan dugsi Dhexe ama sarre
2- Inaad si fiican u taqaano luqada Ingariiska iyo tan Soomaaliga, hadii aad taqaano luqad kale oo dheeri ahna waxaad leedahay texgelin gaar ahaaneed.
3- Inaad tahay qof agabka shaqada lagaaga baahan yahay si fudud ku heli kara, tusaale ahaan Computer iyo Internet
4- Inaad leedahay aqoon saxaafadeed, islamarkaana aad xiiseyso Raadinta iyo dabagalka wararka.
6- inaad Wax Uun ka taqaanid ama kaaga baxsantahay qaabka Updateka loogu sameeeyo ama wararka loogaliyo Shabakadaha Isticmaala WordPress oo ah Barnaamijka ay shabakada Dalmarnews.com ku dhisantahay.
7. Inaad tahy shakhsi ku sifaysan qabyaalad nacayb iyo wixii dadka kala qoqobaya dhex galistooda.
Hadaba hadii sharuudahaas ay yihiin kuwa aad ka soo bixi karto fadlan email inoogu soo dir dalmarnews@gmail.com.
Cv gaaga oo Fah faahsan
Shahaado Saxaafadeed Ama Wixii U Dhigma ee aad haysatid.
haddii aad ka mid noqoto dadka aan u xulano inaan wareysi shaqo la yeelano waan kula soo xiriiri doonaa Insha Allah.
F.G: Waxqiga ugu dambeeya e qabasahda Codsiyada Waxa ay ku eeg tahay 6/8/2017 oo ah maalinta axada insha allah
Nasiib Wacan :
Xafiiska Guud ee Shabakada Dalmarnews.com
Agaasimaha Guud ee Shabakada Dalmarnews